शनिवार देखि मेलम्चीमा फेरी बाढीले के के गर्यो ? घरबार विहिन बनाउने क्रम रोकिएन – Dailny NpNews
शनिवार देखि मेलम्चीमा फेरी बाढीले के के गर्यो ? घरबार विहिन बनाउने क्रम रोकिएन
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०७८ समय: ९:३२:५९
काठमाडौ । शनिबारदेखि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले हालसम्म ६० घर टहरा बगाएको छ। हेलम्बुका किउल, चनौटे, ग्याल्थुमलगायत क्षेत्रमा मात्र ५५ र तालामाराङ तथा मेलम्चीमा पाँच घरटहरा बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत असार १ गते आएको भीषण बाढीले लेदो भरिएका घर गए रातिको बाढीले बगाएको हो।
ती घर खाली थिए। उनका अनुसार चनौटे ग्याल्थुम र ढुङ्गे्र बजार जोखिममा छन्। हेलम्बु गाउँपालिका–४ को ढुङ्गे्र बजार पनि जोखिममा रहेकाले प्रहरी र सेनाले स्थानीयवासीका घरबाट सामान सार्न सहयोग गरिरहेका अधिकारीले जानकारी दिए। उनले जोखिम कायमै रहेकाले सजग रहन सम्पूर्णमा आग्रह गरे।
बाढी चनौटे बजार भएर बगिरहेको छ। यसअघिको बाढी पनि यही बजारबाट बगेको थियो । खोलालाई पुरानै धारमा फर्काएर बजार जोगाउन प्रयास भइरहेको थियो। बाढीले मेलम्ची नगरपालिका–१२ मा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मेलम्ची, इन्द्रावती, चौतारा र पाँचपोखरीलाई जोड्ने एकमात्र बाहुनेपाटी पुल जोखिममा परेको छ।
१३३ पटक हेरिएको